MANANDONA ANTSIRABE II : Hitrangana aretina hafahafa ny mpianatry ny CEG
Mandalo fahasahiranana sy miaina ao anatin’ny tebiteby amin’izao fotoana izao ny mpianatra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra ao amin’ny CEG Manadona, Distrikan’Antsirabe faharoa. 20 mars 2017
Tao anatin’ny andro maromaro izao dia hihetsehan’ny aretina hafahafa ny mpianatra ka ireo ankizivavy manodidina ny 12 ka hatramin’ny 15 taona ao amin’ny kilasy faha-4 sy faha-3 no tena hianjadian’izany aretina hafahafa izany.
Araka ny fanazavan’ny ray aman-dreny izay nanan-janaka niharan’ity aretina hafahafa ity dia mihinjitrijitra tahaka ireny itoeran-javatra ireny ny ankizivavy ary very saina tahaka ny adala izay voany. Ny tena mahatalanjona ny olona dia isaky ny alatsinainy sy alarobia ihany no mihetsika io aretina io ary mitombo isa hatrany isaky ny amin’ireo andro ireo ihany koa ny mpianatra voany.
Nanatona toeram-pitsaboana ihany ny ray aman-dreny saingy niala maina tamin’ny fitsaboana ny dokotera. Misy aza no nanatona ireny mpitsabo nentim-paharazana ireny saingy tsy nahafa-piry ihany koa fa ny volan’ny ray aman-dreny fotsiny no lany. Manoloana izany dia niditra an-tsehatra ny mpitondra fivavahana any an-toerana ka nandray an-tanana ireo tsy salama.
Vavaka sy fametrahan-tanana ataon’ireo Mpiandry no nentina nampahery ireo mitondra ny aretina ary tsapa tamin’izany fa toa nidiran’ny devoly ireto ankizivavy ireto ary aorian’ny vavaka dia mitony ny hadalany. Nisy ireo efa sitrana saingy mbola misy koa anefa ireo izay tsy salama ary izy ireo dia miteny anaran’olona iray avokoa rehefa iny izy mihetsika aretina iny. Manoloana izany dia nandray ny andraikiny ary niditra an-tsehatra amin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana sy ny Ben’ny tanàna mba hahafantarana izay tena tompon’antoka marina mikasika ity fisian’ny aretina hafahafa ity.